Senatera Auguste Philippe : « Tsy fitiavan-tanindrazana ny fanakorontanana » -
AccueilSongandinaSenatera Auguste Philippe : « Tsy fitiavan-tanindrazana ny fanakorontanana »
Senatera Auguste Philippe : « Tsy fitiavan-tanindrazana ny fanakorontanana »
08/01/2018 admintriatra Songandina 0
Voizin’ny mpanohitra hatrany ny filazana fa hisy korontana eto amin’ny firenena amin’ity taona 2018 ity, misy mihitsy aza ireo nanao fanambarana mivantana fa tsy hilamina ny tany raha tsy afaka milatsaka hofidiana ny tenany, tahaka an’i Marc Ravalomanana. Mamaly ireny fanambarana ireny ny senatera voafidy tamin’ny anaran’ny antoko Fanorolahy ho an’ny Faritanin’i Fianarantsoa, Randrianandrasana Auguste Philippe…
«Tsy fitiavan-tanindrazana ny fanakorontanana fa fampijaliana vahoaka ary tsy hitondra ny firenena any amin’ny tena fampandrosoana maharitra ». Io no teny nataon’ny senatera Randrianandrasana Auguste Philippe raha nanontaniana ny heviny manodidina ny fanambarana nataon’ireo mpanao politika avy amin’ny fanoherana. Nambaran’ity olomboafidy ity fa tokony handini-tena ihany ny mpanao politika sasan-tsasany eto amintsika ary tokony hibanjina izay hanasoavana ny vahoaka sy hanatsarana ny fiainam-bahoaka fa tsy ho fanakorontanana. Manana ny heviny manoloana ny fanambarana nataon’i Marc Ravalomanana ny senatera Randrianandrasana Auguste Philippe araka izao hitaterana azy izao: “tsy izy (Marc Ravalomanana) no voalohany tsy nahazo nilatsaka teto amin’ny firenena. Ohatra amin’izany ireny olona tsy nahazo nilatsaka kandidà satria tsy ampy enim-bolana ny fe-potoana nijanonany teto amin’ny firenena kanefa tsy nanakorontana ireny olona ireny. Iza koa anefa no hikorontana eto? Efa leo izany korontana sy krizy izany ny vahoaka ary tena nijaly mihitsy vokatr’izany ary tsy misy olona nateraka tsy maintsy hitondra izany koa!”.
Nasian’ity senatera ity tsindrim-peo fa izay hisian’ny fampandrosoana tena izy no zava-dehibe ho azy ary nanambara ny tenany fa mizotra mankany amin’ny fampandrosoana tokoa izao fitondrana Hery Rajaonarimampianina izao. Nandray ohatra vitsivitsy moa ny tenany: “iaraha-mahita ny ezaka famelomana aina ireo toerana sy fotodrafitrasa fototra takiana amin’ny fampandrosoana, raha tsy hilazana afatsy ireo fotodrafitrasa goavana maro any Marovoay, Ambato Boeny ary Bas Mangoky sy ny maro tsy voatanisa. Efa ela ireny seha-pamokarana ireny no tsy nisy nijery intsony raha tsy tamin’izao fitondrana Hery Rajaonarimampianina izao.
“Vonona hiatrika fifidianana sy hanome tanana tanteraka ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny tenako sy ny antoko Fanorolahy ary hanao izay fomba hanohanana ireo foto-kevitra voalaza tetsy ambony dia ny fampandrosoana tena izy. Efa fantatray avokoa ny hafatra hampitaina any amin’ny vahoaka ka tsy matahotra na misalasala akory hiatrika fifidianana”. Naneho ny fiombonan-kevitra amin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina mikasika ny adihevitra manodidina ny antsoina hoe “fifanarahana politika” ny senatera Randrianandrasana Auguste Philippe ary nampita hafatra ho an’ny mpanohitra ihany koa, araka izao manaraka izao: “inona tokoa moa no ilàna izany fifanarahana politika izany? Misy andininy milaza ny tokony hanaovana izany angaha ao anatin’ny lalam-panorenana?”.
Nitondra ny fomba fahitany ny fanaovana politika eto amintsika, indrindra ny fanoherana ny loholona voafidy tao Farafangana ka nilazana fa “lasa fitambarana olona tsy nahazo fahefana ny mpanohitra eto amintsika, tsy mikatsaka velively izay hampandrosoana ny fiainam-bahoaka fa ny handrodana fitondrana hatrany”. Mikasika ny fifidianana izay hatao amin’ity taona 2018 ity indray dia nambarany fa mendrika ny hamita mandà roa mihitsy ny filoha Hery Rajaonarimampianina satria maro ireo tetikasa efa tontosa, ao koa anefa ireo efa natomboka ary ilàna fotoana ny fanatanterahana izany rehetra izany. “Tokony havela hiasa ny mpitondra, nomen’ny lalam-panorenana alàlana hanao mandà roa ny filoha, aorian’izany fe-potoana izany no hitsarana ny zava-bitany na tsia”, hoy hatrany ny senatera Randrianandrasana Aguste Philippe.
Tiana moa ny manamarika ny taona 1999 no naha lany azy ho ben’ny tanànan’i Farafangana tamin’ny isam-bato 69% raha nifaninana tamin’ireo kandidà avy amin’ny antoko Tim, Arema, Mfm, Ledear Fanilo, Rpsd, sns. Lany solombavambahoaka indray ny tenany ny taona 2002 ary mambra ny C.T nandritra ny fitondrana Tetezamita. Voatendry ho DAF tao amin’ny mnisteran’ny Asa vaventy indray kosa ny taona 2012 ary lany ho senatera nandritra ny fifidianana ny taona 2015 nifanandrina tamin’ny Mapar, Tim, Arema, Leader Fanilo. Marihina moa fa avy amin’ny antoko Hvm ny enina tamin’ireo senatera fito voafidy ho an’ny Faritanin’i Fianarantsoa.
Hery Rajaonarimampianina : Nahita mpiara-miombon’antoka maro tany Sina
Mihamafy ny fifandraisana eo amin’i Madagasikara sy Sina. Anisan’ny goavana amin’ny fitsidihan’ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, miaraka amin’ireo mpikambana maromaro eo anivon’ny governemanta ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin’ny firenena roa tonta eo amin’ny lafin’ny politika, ...Tohiny
Hoy ny HVM : « Malahelo hono ny Filoha… ! »
Hery Rajaonarimampianina : « Fototry ny fampandrosoana ny sehatry ny fitrandrahana »
Basikety – All Star du Président : Lavo ny Rosianina, lasan’i Madagasikara ny amboara
Hery Rajaonarimampianina-HATOLOTR’IREO AMPANJAKA HO KANDIDA AMIN’NY 2018